पात्र भर्सेज पात्रहरू | मझेरी डट कम
पात्र भर्सेज पात्रहरू
ks — Sun, 10/28/2012 - 20:23
साहित्यिक माहौलमा एक्कासि मीनाक्षीको उपन्यासले चर्चा पायो । विशेषतः पुरुष लेखक, समीक्षक, पत्रकारहरूले उसको लेखनलाई रातारात पारिजातसँग तुलना गरििदए । विदेशबाट फर्किएको उसको विगतलाई गाँठवाल माने ।
"सुन्यौ ! त्यो '८० की दशककी हिरोइन छे नि विन्दिया गोस्वामी ! ठ्याक्कै काटीकुटी त्यस्ती छे ।" स्वनामधन्य समीक्षकज्यूले भन्नु भो । बिचरी समरीले के पो गर्न सक्थी र ! भर्खर साहित्यमा पाइला चालेकीलाई के थाहा साहित्यको माफियामा कसरी टिक्नुपर्छ ?
"भयंकर राम्रो लेखन छ । बोल्ड छे । भाले लेखन हो उसको ।" इत्यादि । समरीलाई पनि समीक्षकज्यूको नायिका, तथाकथित विन्दिया गोस्वामी हेर्ने रहर जाग्यो ।
"तपाईंको पर्सिको कार्यक्रममा आउनुहोला नि हैन, तपाईंकी मीनाक्षी?" अलि जलन मिसाएर बोली ।
"अा ! अन्जनाको पुस्तक समीक्षाका लागि वक्तामा राखिदिएकी छु । राम्रो बोल्छे पनि ।" समीक्षकज्यू गर्वसाथ बोल्नु भो ।
थरीथरीका हल्लाहरू आए बजारमा । पुस्तक समीक्षकहरू एकअर्कामा आरोप/प्रत्यारोप गर्न थाले । एकअर्कामा कसले राम्रो र प्रशंसापूर्ण लेखेर रझिाउने भन्नेमा होड चल्यो । फेरि, त्यसरी नै मीनाक्षीको उपन्यासको दोस्रो संस्करण निस्कने रे भनेर खबर सुनिन थाल्यो । महिला लेखकहरूमा ईर्ष्याको ज्वालामुखी फुटे । यो केटीले साहित्यको माहौल बिगारी भनेर गाइँगुइँ चल्यो फेरि ।
समरीको मोबाइलको घन्टी बज्यो । दुई महिना गायब भएको प्रत्यूषले फोन गरेको रहेछ । उठाऊँ कि नउठाऊँको मनस्थिति भयो । अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग नगर्ने उनको बानीले चित्त दुखाएको मनलाई थाती राखेर कल रििसभ गरी ।
"समरी तिमीलाई हटन्युज सुनाउन फोन गरेको !" फेरि, उही मीनाक्षीको खबर ।
आज नारी स्रष्टाहरूबीच भनाभनको दोहोरी चल्यो रे ! कार्यक्रममा मञ्चमा बसेका महिला साहित्यकारहरूलाई आक्रामक प्रश्न गरेका कारण उसले अपमानित हुनुपरेछ । आफ्नो सौन्दर्यको प्रयोग गरेर साहित्य बिगारेको, आठ कक्षा मात्र पास गरेकीको के कुरा भो र ! विदेशमा भाँडा मोलेर कमाई ल्याएको पैसाले किनेको साहित्यिक प्रशंसाको फूर्ति ! यी सबै मीनाक्षीलाई गरेको साहित्यिक भनाभन । समरीले सम्झी, हरे ! साहित्य ! मीनाक्षीसँग त्यस दिनको कार्यक्रममा उपस्थित टेलिभिजन पत्रकारले बनाइदिएको प्रश्न भन्ने पनि सुनियो । सँगसँगै हिँड्ने ती पत्रकार प्रायशः मीनाक्षीलाई लिएर हरेक साहित्यिक कार्यक्रममा पुग्थे । बाँकी पुरुषहरू लोभी नजरले हेर्थे र चित्त बुझाउँथे । बिस्तारै बिस्तारै साहित्यिक पत्रिकाहरूमा उसका कथाहरूले निरन्तरता पाउन थाले । सँगसँगै उसका लेख तथा कथा फलानो र ढिस्कानोले लेखिदिएको गफ पनि छरनि थाल्यो ।
"मीनाक्षीको ... उपन्यासभन्दा त युधीर थापाका उपन्यासहरू बढी साहित्यिक हुन्छन् । न कुनै घटनाक्रम छ, न कुनै तुक छ ।" दीपकले अनलाइनमा लेखेको टेक्स्ट देखेपछि समरी खुसी भएकी थिई । देख्नेहरूले मीनाक्षी भेटेपछि टेलिभिजन पत्रकारले समरीलाई छाडेको मुख्य निक्र्यौल गरेको थियो । मीनाक्षीलाई देख्दादेखि पैसा, सौन्दर्य र शालीनताकी प्रतिमूर्ति मान्न थाल्यो पुरुष साहित्यिक समाजले । हुँदै नभएको सामान्य सम्बन्धलाई पनि ईर्ष्याले हेर्न थाल्नुपर्ने समय आएपछि टेलिभिजन पत्रकारलाई समरीले धोकेबाज मान्न थाली । बिस्तारै समरीमा पनि परविर्तन आउन थाल्यो । हरेक साँझ पत्रकार, समीक्षक, नाम चलेका ख्यात-कुख्यात स्रष्टाहरूसँग रसादी र काष्टादीको प्रयोगमा आउन थाली । शरीरको बुइँगल खाली भएकाहरूसँग माझखण्ड र मटानका कुरा गर्न सक्ने भई । होनचाको भट्टीपसलदेखि बेकरी क्याफेसम्मको बिल तिरीतिरी साहित्यकारहरूसँग साहित्यकार हुने सीप, कला र कौशल सिक्न लागी । कतिसम्म भने उसका कविता, लेख नछाप्ने सम्पादकलाई भनसुन गराउन मान्छेको जमात तयार गरी ।
एउटा अघोषित युद्ध सुरु भयो । पुरुष साहित्यकारहरूसँग मीनाक्षीको कुरा थुती दुईबाट चार जनाको कानमा पुर्‍याउने पनि काम भयो । एउटा लक्ष्मण रेखीको सिर्जना हुन थाल्यो । वारपिट्टि समरीले बिल खर्चेको जमात र अर्कोतर्फ मीनाक्षीको नेत्रपानवालाहरूको । साहित्यिक माहौलमा मीनाक्षी र समरीको चरत्रि उछालाउछाल हुँदै गए । गफको मेसो फुकाउन समरीसँग मीनाक्षीको एउटा कुरा मात्र निकालिदिए पुग्ने भो । बाँकी कुरा आफैँ उधिँ्रदै जाने स्थितिमा आइपुग्यो । पुरस्कार, सम्मान, साहित्यिक यात्रा र पत्रपत्रिकामा इन्टरभ्युको पनि होड चल्यो दुवैमा । अब अरू अवसर खोज्नेहरूका लागि दुवै जनालाई एकअर्काको कुरा उधिनिदिए पुग्ने भो । सर्प र सिँढीका खेल खेल्न जान्नेले खुबै उपयोग गरे । एकअर्कालाई कथाको पात्र बनाएर कथामा, लेखमा खाडलमा पार्ने कुराको सुरुवात पहिल्यै थियो ।
मीनाक्षीले आफ्नो उपन्यासको दोस्रो संस्करणको अन्तिम पातोमा समीक्षकज्यूलाई 'महान्वाणी' नलेखाएकामा भयंकर रसि उठेको थियो । एक साँझ असनको गल्लीको होनचाको पसलमा एक क्वार्टर पेटमा हुलेपछि बिस्तारै मीनाक्षीप्रतिको रुष्टता प्रकट भो ।
"कथामा यौन ल्याउँदैमा नारी लेखन बोल्ड हुन्छ र ?" समरी चुप लागेर बसी । समरीले ठम्याउन सकिन, समीक्षकज्यूको रसादी बोलेको हो वा मीनाक्षीको उपन्यासमा भूमिका लेख्न नपाएको रोष ।
"त्यस्तो लाजमर्दो यौनकथा सुनाउँदा त्यस केटीको अनुहारमा पटक्कै लाज थिएन ।" मानौँ लाजजति मीनाक्षीलाई ठेक्का परेको होस् ।
"त्यति मात्र कहाँ हो र ! उसको पुस्तक-समीक्षा गरििदएन भनेर जथाभावी भन्दै हिँड्छे ।" आदि-इत्यादि । लोकट स्लिभलेस कपडाबाट चियाएको वक्षले समीक्षकज्यूलाई उत्तेजित तुल्याएको समरीले स्पष्ट बुझेकी थिई ।
"तिम्रो निर्दोष अनुहारले मलाई झकझकाउँछ । कतै मैले तिमीलाई बोर त गरनिँ । मीनाक्षीको कुरा गरेर तिमीलाई दिक्क त लगाइनँ ?" दुई क्वार्टर सिग्नेचर पेटभित्र पुर्‍याएपछि समीक्षकज्यूले बिस्तारै आफ्नो हात समरीको तिघ्रामा पुर्‍याए । नजिकिने बहानामा शरीरसँग ढेपिन थालेको महसुस समरीलाई भयो ।
"आठ बज्न लाग्यो । तपाईंको घर जाने बस पाइन्न फेरि !" समरीले कुरा मोडी ।
"सधैँ गएकै घर त हो नि !" समीक्षकज्यूको जवाफ ।
"रात कहाँ काट्नु हुन्छ त तपाईं ?"
"मैले चिनेको गेस्ट हाउस छ सुन्धारामा । त्यहीँ जाऔँ हुन्न र !" समीक्षकज्यू रोमान्टिक हुँदै जवाफ फर्काउँछन् ।
"होइन मेरो ल्यापटपमा काम गर्नु छ ।" समरी बिस्तारै तर्किन खोज्छे । उसलाई थाहा छ, अब पनि बाटो लागेन भने समीक्षकज्यूले बिताउँछ ।
ट्वाङ्ट्वाङ् एसएमएसको घन्टी बज्छ ।
"के छ मैया कोसँग ? हाम्रो फोन उठाउन नहुने ?" एसएमएस आएछ । यस्सो हेर्दा त तीन मिस्डकल भइसकेछ । दिउँसो साइलेन्समा राखेको मोबाइलको मोड चेन्ज गर्न बिर्सिछे ।
"हैन, म अन द वेमा छु । घर पुगेर कल गर्छु है !"
जवाफमा एसएमएस टाइप गर्छे समरीले । उसको अनुहारमा खुसी छाउँछ । महिनौँ दिनदेखि चाहेको रंग-पत्रकारको फोनको आशा आज पूरा भएको छ । कारण उसलाई पत्रिकामा छापिनु छ । पुरुष संवाद गरेर चर्चामा आउनु छ । उसको अबको ध्यान रंग-पत्रकारतिर मोडिन्छ ।
"कसको एसएमएस ? सञ्जीवको हो कि के हो ?" समीक्षकज्यू प्रश्न गर्छन् ।
"हैन ! भाइको एसएमएस हो ।" ब्याग बोक्ने तरखर देखाउँछे । बिल तिरेपछि अप्ठ्यारो काठको भरेङ ओर्लंदै गर्दा समीक्षकज्यूले सुरक्षाको बहानामा समरीको हात समाउँछन् । साँघुरो र अँधेरो गल्ली पार गर्दै दुवै मूलसडक आएपछि नाइट ट्याक्सी रोक्दै समरी उनको कान छेउमा फुुसफुसाउँछे, "घर पुगेपछि फोन गर्नु है । ल बाई !"
सहरमा भदौमा बर्सेनि लिटरेचर फेस्टिबल चल्छ । साहित्यमा लाग्नेहरूको कुम्भमेला हो र अवसर पनि । रंग-पत्रकारले सानो कोलमको पुरुष संवाद शीर्षकमा अन्तर्वार्ता छापिदिएपछि समरी यस्सो चिनिने भएकी छे । यसैको भरमा एउटा कविता वाचनसम्म गर्न पाउने अवसरको लोभ त्याग्न सकेकी छैन । प्रयास जारी छ उसको, कुन माध्यमबाट त्यस लिटरेचर फेस्टिबलमा सामेल हुन पाउने भनेर । समीक्षकज्यू, रंग-पत्रकार, टेलिभिजन पत्रकार, बिल खर्चेका साहित्यकारहरूको भनसुनका भरमा भए पनि अवसर र सामेल हुने मौकाका लागि अचेल लागिपरेकी छे ।
"यसपाला पुस्तक समीक्षाबारे मीनाक्षीको लेख बडो सन्तुलनपूर्ण र राम्रो क्वालिटीको छ ।"
समीक्षकज्यूको चरत्रिले कोल्टे फेर्छ । टेबलमा रहेको काष्टादीमा भन्दा झोल पदार्थमा जोड दिने उनको आचरण अझै कायम नै छ । समरीलाई लाग्छ, यो के टेन्सन आइपर्‍यो, बल्ल समय मेरो फेवरमा रह्यो भन्न नपाई किन समीक्षकज्यू फेरि मीनाक्षीतिर ढल्किन थाल्नुभएको हो । सोच्दा सोच्दै परविर्तन हुनुको मेसो समरीले भेट्न सक्तिन । फेरि, अर्को क्वार्टर थपेपछि रहस्य खुल्दै जान्छ ।
"आज रविवार पत्रिकामा मेरो लेखको पैसा लिनु थियो ।"
"अनि, के भो त !" समरी सोध्छे ।
"मोरा गरबिहरूले दसैँमा दिने रे ! घन्टा खाएर बस्नु त्यतिन्जेल ? स्वास्नीका अगाडि लाज भइसक्यो ।"
बल्ल कुरो कुलेसोतिर लाग्यो । समीक्षकज्यू लेख्न प्रेरति गर्छन् । हिजो भर्खर निस्केको उपन्यासको पुस्तक समीक्षा लेखेर उसको नाममा छपाइदिने पनि आशय प्रकट गर्छन् । समरी बल्ल बुझ्छे, कीलो कहाँनेर ठोकिएको छ । पर्समा भएको पाँच सय रुपियाँको नोट समीक्षकज्यूको खल्तीमा घुसारििदन्छे । त्यसै बहानामा समरीको हात प्रेमिल भएर समीक्षकज्यू पक्रन खोज्छन् । समरी हिउँझै शीतांग हुन्छे, कारण उसको कविप्रेमी अचेल यही सहरमा छ ।
कथाले अन्त्यको मोड लिनुपर्ने हो । तर, कसरी टुंग्याउने कथाकारले सोच्न सकेका छैनन् । कथाका दुवै पात्रसँग भेट नभएको र दुवैका बारेमा नसुनेको महिनौँ भयो । कथा बेवारसिे अवस्थामा छ अचेल । मीनाक्षी पुनः विदेश भासिई । सहरमा उसको हल्लाको चर्चा सकियो । समरीले ईर्ष्या गर्नुपर्ने अर्को पात्र फेला पारेकी छैन । पछिल्लोपटक सुनिएको हल्ला समरी आफ्नो कवि भनाउँदो प्रेमीका लागि लब्बिङ् गर्छे रे ! रंग-पत्रकार अचेल हिरोइनका बारेमा शृंखलाबद्ध लेख लेख्न थालेको छ । टेलिभिजन पत्रकार अर्की केटी लिएर साहित्यिक कार्यक्रममा देखिन्छ । प्रत्यूष डकुमेन्ट्री बनाउनतिर लागेको छ । आज मात्र मीनाक्षीका बारेमा दैनिक पत्रिकाका पत्रकारले थप कुरा सुनाए । विराटनगरको साहित्यिक कार्यक्रमबाट फर्कंदा दर्पण प्रतिष्ठानका अध्यक्षले अर्का पौडेल थरका साहित्यकारलाई सबैका अगाडि सुनिने गरी कानमा भने रे, "मीनाक्षीलाई एकचोटि के .... त्यो केटी त मेरोपछि लागेर हैरान । बल्ल हाइसन्चो भो !"
२०६९ कार्तिक ५
आएल दिवाली (कविता)
स्वर्गमा केही कविहरुका गनगन
म एक हूँ (गजल)
को कसको हो
हिन्दूराष्ट्र हो मेरो
तीन मुक्तक (कोही भन्छन्)
जिउँदै जलेको देख्दैन कसैले,
साथ दिन्छु भन्नेहरू
मेची दुख्दा काली दुख्दा
के के भयो भयो कुन्नि
हिउँभन्दा चिसो आगोभन्दा तातो
बारम्बारै बन्द पार्दा
सपनीमा पनि मैले देखुँ तिमीलाई घरी घरी
टुक्के दिदी (बाल-एकांकी)